Tixgelinnada Muhiimka ah Markaad Xulaneyso Nidaamka Nidaamka Iibinta (POS) | Martech Zone
Tixgelinnada Muhiimka ah Markaad Xulaneyso Nidaamyada Goobta Iibka (POS)
Jimco, Diisambar 27, 2019 Jimco, Diisambar 27, 2019 Douglas Karr
Xalka halka lagu iibiyo (POS) xalalka ayaa mar fudud ahaa, laakiin hadda waxaa jira xulashooyin badan oo kala duwan, mid walbana wuxuu bixiyaa astaamo u gaar ah. Awood adag barta iibka waxay shirkaddaada ka dhigi kartaa mid si muuqata u waxtar badan oo saameyn togan ku yeelan karta qadka hoose.
Waa maxay POS?
A Barta iibka Nidaamku waa isku-dar ah qalab iyo softiweer u suurta galiya ganacsade inuu iibiyo oo uu u soo uruuriyo lacag bixinta iibka goobta. Nidaamyada casriga ah ee loo yaqaan 'POS' waxay noqon karaan kuwo ku saleysan softiweer waxayna isticmaali karaan taleefan gacmeed, tabbiil, ama desktop. Nidaamyada dhaqameed ee POS sida caadiga ah waxaa ka mid ahaa qalabka wax lagu iibsado ee leh taageerada shaashada taabashada iyo isku dhafka khaanadda lacagta.
Maqaalkani wuxuu dabooli doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u doorato barta saxda ah ee iibinta barnaamijka ganacsigaaga. Iyada oo xalal badan oo kaladuwan la heli karo, waxaa muhiim ah in hore loo sameeyo cilmi baaris iyo in la garto midka ku habboon baahiyahaaga.
Nidaamka Iibinta Dhab ahaantii ma loo baahan yahay?
Ganacsiyada qaarkood waxay isku dayaan inay yareeyaan kharashaadka iyagoo ku kacaya iyada oo aan la helin xalka iibka, laakiin maalgashigan ayaa leh awood lacag u sameyso shirkaddaada. Lacagta yar ee aad ku qarashgareyso rukunka waxba iskama barbardhigaan waqtiga iyo lacagta aad keydin doontid maalin kasta oo shaqo.
Marka lagu daro fududeynta macaamil ganacsi, barta casriga ee dalabyada iibinta waxay bixiyaan qalab aad u tiro badan oo loogu talagalay inay ka dhigaan dhinac kasta oo ganacsigaaga ah inuu si habsami leh u socdo. Haddii aad rabto inaad diirada saarto cilaaqaadka macaamiisha, tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa barta xalka iibka oo ay ku jiraan barnaamijyada daacadnimada iyo astaamaha kale ee muhiimka ah. Intaa waxaa sii dheer, adeegyo badan ayaa si aan kala go 'lahayn ugu dhexgalaan barnaamijyada kale ee caanka ah sida Shopify iyo Xero.
Nidaamyo Kala Duwan Oo Loogu Talagalay Ganacsiyada Kala Duwan
Barta adeegyada iibku waxay beegsaneysaa shirkado kala duwan oo ay ku jiraan kuwa wax ku iibiya qadka internetka iyo ganacsiyada leh dukaamada jirka. Iyadoo maskaxda lagu hayo, waa inaadan wax dhibaato ah ka helin helitaanka ikhtiyaar u dhigma miisaaniyaddaada iyo cabirka astaantaada.
Dheeraad dheeraad ah, nidaamyo badan iyo inbadan ayaa udhaqaaqaya dariiqa dariiqa ku saleysan kaas oo baahinaya macluumaadka iyadoo laga jarayo qalab kasta oo shaqsi ah. In kasta oo nidaamyo dhaqameed wali la heli karo, beddelaad daruur ku saleysan aad iyo aad ayey caan u yihiin.
5 Tixgelinnada Muhiimka ah Markaad dooranaysid POS
hardware - Nidaamyada kala duwan ee iibka ayaa loogu talagalay inay la shaqeeyaan noocyo kala duwan oo qalab ah, waxaadna u baahan tahay inaad tixgeliso kharashyada qalabka marka aad isbarbardhigayso xulashooyinkaaga. Haddii aad ku maamuli karto POS taleefan keliya, tusaale ahaan, waxaad hagaajineysaa shaqeynta intaad kudareyso wax yar-ilaa-sare. Dhinaca kale, barnaamijyada qaarkood waxay sifiican ugu shaqeeyaan kiniiniyada ama aaladaha loo qoondeeyey, taas oo horseedi karta qarash aad u badan. Intaas waxaa sii dheer, ganacsiyada waaweyn iyo maqaayadaha inta badan waxay u baahan yihiin qalab ballaaran oo kala duwan, oo ay ku jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin daabacadaha rasiidhada, boosteejooyinka maaraynta miiska, iyo inbadan.
Lacagaha Bixinta - Iibsashada nidaamka POS si otomaatig ah macnaheedu maahan inaad isku darsatay qaab kaararka deynta lagu bixiyo. In kasta oo inta badan nidaamyada POS ay u qaabeeyaan akhristaha kaarka deynta, kuwa kale waxay u baahan karaan dib-u-habeyn, taas oo adiga kugu kici karta. Raadi POS leh akhristaha kaarka isku dhafan ama mid la midoobi kara akhristaha kaarka deynta ee ka shaqeeya processor-kaaga lacag-bixinta iyo irridda.
Isdhexgalka dhinac saddexaad - Ganacsiyada badankood waxay horeyba u isticmaaleen dhowr qalab wax soo saar, waana muhiim in la helo barta iibka oo si fiican ula shaqeysa dhaqamadaadii hore. Isdhexgalka caanka ah waxaa ka mid ah nidaamyada xisaabinta, nidaamyada maaraynta shaqaalaha, nidaamyada agabyada, nidaamyada daacadnimada macaamiisha, iyo adeegyada rarka. Nidaamka iibka ee 'Square', tusaale ahaan, wuxuu ku xiraa noocyo kala duwan oo dhinacyo saddexaad ah oo loogu talagalay wax kasta oo ka yimaada eCommerce ilaa suuq-geynta iyo xisaabinta. Isku-darka la'aan, ku darista adeegyo cusub istiraatiijiyadda ururkaaga waxay si aan loo baahnayn u murugayn kartaa howlaha muhiimka ah. Nidaamyada iibka ee barta ayaa dhammaantood ku saabsan waxtarka, sidaas darteed waa wax aan fiicnayn in la isticmaalo barxad aan la xiriirin codsiyada kale. Tusaale ahaan, si otomaatig ah u soo dejinta macaamilada adeegga xisaabinta ayaa aad uga waxtar badan sidii gacanta loogu wareejin lahaa inta u dhexeysa barnaamijyada.
Ammaanka - Macaamiisha ayaa u qaata si qarsoodi ah si ka sii daran sidii hore, iyo jabsiga xogta ayaa si la yaab leh ugu badan ganacsiyada nooc kasta leh. Maareeyayaasha ayaa inta badan dhayalsada muhiimada ay leedahay in xog lagu xafido, tanina waxay si gaar ah u khuseysaa markay macaamiisha siinayaan macluumaad xasaasi ah sida lambarrada kaararka deynta. The Warshadaha Kaarka Bixinta wuxuu sharaxayaa heerarka amniga ee macquul ah ee nidaamka iibka iyo qaababka kale ee habka lacag bixinta. Barnaamijyada si fiican loo yaqaan guud ahaan waxay waafaqsan yihiin heerarkan, laakiin waxaad sidoo kale raadsan kartaa ilaalin aad u adag, sida xog ururinta iyo dhamaadka iyo dhammaadka sirta. Nabadgelyadu waa inay noqotaa mid ka mid ah mudnaantaada koowaad markaad raadineyso barnaamij POS lagu kalsoonaan karo.
Taageerada - Uma maleyn kartid in taageerada ay tahay muuqaal muhiim ah, laakiin shabakad taageero liidata ayaa ka dhigi karta bartaada iibka si aad ah inay u adagtahay in la isticmaalo. Ikhtiyaarrada lagu kalsoon yahay waxay ku siinayaan taageero joogto ah waxayna kaa caawinayaan inaad xalliso arrimaha ka hor inta aysan si xun u saameyn ganacsigaaga. Haddii ay suurtagal tahay, waa inaad raadisaa adeeg bixiya taageero 24/7 ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qof ka jawaabi doono markasta oo aad dhibaato ku qabtid nidaamka. Codsiyada qaarkood xitaa waxay siiyaan adeegsadayaasha cusub caawimaad goobta sida ay u dejiyeen adeegga markii ugu horeysay. Ganacsiyada yaryar badiyaa waxay dib u dhigaan maalgashiga barta iibka, laakiin rukhsad tayo sare leh ayaa u qalantaa shirkadaha ku dhowaad cabbir kasta ha lahaadee. Kuwani waa wax yar oo ka mid ah arrimaha ugu habboon ee maskaxda lagu hayo marka la isbarbardhigayo barta adeegga iibka.
Tags: daruurtii POSdaruur ku saleysan posmobilada posalbaabka lacag bixintaPOSqalabka kombiyuutarkasoftware soscreen taabashada